အလှမယ် Sarah Fish ရဲ့ ဖုန်းကို စနောက်ပြီး ခိုးယူခဲ့ကြောင်း အလှမယ် ခြူးသက်လွင်ဝန်ခံ ..! - APANNPYAY
Home / ဖြစ်ရပ်မှန် / မြန်မာမော်ဒယ်များ / အလှမယ် Sarah Fish ရဲ့ ဖုန်းကို စနောက်ပြီး ခိုးယူခဲ့ကြောင်း အလှမယ် ခြူးသက်လွင်ဝန်ခံ ..!
အလှမယ် Sarah Fish ရဲ့ ဖုန်းကို စနောက်ပြီး ခိုးယူခဲ့ကြောင်း အလှမယ် ခြူးသက်လွင်ဝန်ခံ ..!
Apann Pyay 1:27 PM ဖြစ်ရပ်မှန် , မြန်မာမော်ဒယ်များ Edit
လီဆူတိုင်းရင်းသူ Miss Universe Naypyitaw 2017 အလှမယ် Sarah Fish ၏ ဖုန်းကို ပွဲတစ်ခုတွင် စနောက်သည့် သ ဘောဖြင့် ခိုးယူခဲ့မိကြောင်း အ လှမယ်ခြူးသက်လွင်က ဝန်ခံ တောင်းပန်သည့် ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ဇွန် လ ၇ ရက်က ၎င်းအသုံးပြုသည့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်တွင် Live လွှင့်၍ ပြောကြားခဲ့သည်။
‘‘ဆာရာ့ဖုန်းကို စချင်နောက် ချင်တဲ့ စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ယူ သွားမိပါတယ်။ ဝန်ခံပါတယ်။ အ ရင်ဆာ့ရာအကောင့်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေ၊ ကောင်လေးတွေ၊ ကောင်မလေးတွေကိုလည်း ဆဲ လိုက်တယ်။ အဲဒါတောင်းပန်ပါ တယ်။ သူတို့ကလည်း ကြားထဲက နေ ဝင်ပြောတဲ့အတွက် ဆဲလိုက် မိတာပါ။ နောက်ပါတဲ့ Miss ညီမ အယောက် ၂၀ ကိုလည်း တောင်း ပန်ပါတယ်။ သူတို့ရေးတာနည်း ပေမယ့် ကိုယ်ဆဲတာများသွားတဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။ ဆာရာ့ကို အက်စစ်နဲ့ ပက်မယ် ပြောလိုက်တာလည်း သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းကို Live တင်ပြီးပြောခဲ့ တဲ့အတွက် ကိုယ့်အရှက်ကြောင့် ပြောခဲ့မိတာပါ။ ဆာရာပရိသတ် တွေကိုလည်း တောင်းပန်ပါ တယ်’’ဟု Live တွင် ခြူးသက်လွင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖုန်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ယင်းစီစီတီဗီဗီဒီယိုဖိုင်သည် ဇွန် လ ၆ ရက်က ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် လူမှုကွန်ရက်တွင် ဝေဖန်မှုများ မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ယင်းဗီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပေါ်ပြီးနောက် ဝန်မခံဘဲ ငြင်းဆန်ခဲ့သည့် ခြူးသက်လွင် သည် ဇွန်လ ၆ ရက် ညနေက လွှင့်ခဲ့သည့် Live တွင် မှတ်ချက် ပြုရေးသားသည့် အကောင့်ပိုင်ရှင်များကို ဆဲဆိုခဲ့သေးသည်။ အ ထက်ပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အ ခိုးခံရသည့် Miss Sarah Fish က ခွင့်လွှတ်ကြောင်းနှင့် ခြူးသက် လွင်၏ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများ ကို ဆက်လက်အားပေးရန် ၎င်း၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်သစ်မှ Live လွှင့်ပြီး တောင်းပန်ပြောကြားခဲ့ သည်။‘‘အားလုံးနားလည်ပေးကြ ပါ။ အခုခြူးသက်လွင်ကိုယ်တိုင် လည်း ဆာရာ့ကို ဝန်ခံတောင်းပန် ပြီးပါပြီ။ သူ့ဘက်ကနောင်တရလို့ ဝန်ခံသည်ဖြစ်စေ၊ အဖြစ်သဘော အရ ဝန်ခံသည်ဖြစ်စေ ဆာရာ ခွင့်လွှတ်ပါတယ်။ ဆာသူ့နာမည် ကို ဖျက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဆာ အနုပညာလမ်းကြောင်းထဲမှာ ခုမှ ဝင်ခါစဖြစ်တဲ့အတွက် ဆာသာ အဲဒီအရာကို ချမပြရင် အကောင်း မမြင်ပေးကြတဲ့ သူတွေများလာ ပါလိမ့်မယ်။ ဆာဖုန်းပျောက်သွား ကတည်းက ဆာသူ့ကို ချိန်းတယ်။ဆာရာအကောင့်ကို ဝင်သုံးနေတဲ့ အတွက် ညီမရေ မသုံးပါနဲ့။ ဖုန်း လိုချင်ရင် ယူသွားပါလို့ ပြောပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကအကောင့်ကို ဆက်ပြီးသုံးတဲ့အပြင် ပါဆင်နယ် ကိစ္စတွေကိုပါ ထိပါတယ်။ ဆာ အနေနဲ့ ပြောပြလို့ရပေမယ့် သူ့ထိ ခိုက်မှာစိုးလို့ မပြောတော့ပါဘူး။ သူ့ဘက်ကနေလည်း ဆာတစ်ခု လောက် တောင်းဆိုချင်တယ်။ အခုသူကလည်း ဆက်လက်ပြီး သူ့လမ်းကြောင်းနဲ့ သူသွားရမှာဖြစ် တဲ့အတွက် သူပုံတင်သမျှ သူ့ရဲ့ လုပ်ငန်းမှန်သမျှကို ဆက်လက်ပြီးအကောင်းဘက်မြင်ပေးကြပါလို့၊ ဖုန်းသူခိုးဆိုတဲ့ နာမည်ကိုလည်း မပြောမိအောင် ထိန်းပေးကြပါလို့ သူ့အစား ဆာတောင်းပန်လိုပါ တယ်’’ဟု ဆိုသည်။
၆ ရက် နံနက်က တင်ခဲ့သောခြူးသက်လွင်၏ ဖုန်းမခိုးကြောင်း ငြင်းဆန်သည့် ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ကြည့် ရှုသူ လေးသိန်းကျော်ရှိပြီး Live လုပ်သူ ၁,၀၀၀ ကျော်၊မှတ်ချက်ပြုရေးသားသူ ၆၀၀ ကျော်နှင့် ပြန် လည်ဝေမျှသူ ၄၀၀ ကျော်ခဲ့သည်။
လီဆူတိုငျးရငျးသူ Miss Universe Naypyitaw 2017 အလှမယျ Sarah Fish ၏ ဖုနျးကို ပှဲတဈခုတှငျ စနောကျသညျ့ သ ဘောဖွငျ့ ခိုးယူခဲ့မိကွောငျး အ လှမယျခွူးသကျလှငျက ဝနျခံ တောငျးပနျသညျ့ ဗီဒီယိုဖိုငျကို ဇှနျ လ ၇ ရကျက ၎င်းငျးအသုံးပွုသညျ့ ဖစျေ့ဘှတျချအကောငျ့တှငျ Live လှငျ့၍ ပွောကွားခဲ့သညျ။
‘‘ဆာရာ့ဖုနျးကို စခငျြနောကျ ခငျြတဲ့ စိတျတဈခုတညျးနဲ့ ယူ သှားမိပါတယျ။ ဝနျခံပါတယျ။ အ ရငျဆာ့ရာအကောငျ့ထဲက သူငယျခငျြးတှေ၊ ကောငျလေးတှေ၊ ကောငျမလေးတှကေိုလညျး ဆဲ လိုကျတယျ။ အဲဒါတောငျးပနျပါ တယျ။ သူတို့ကလညျး ကွားထဲက နေ ဝငျပွောတဲ့အတှကျ ဆဲလိုကျ မိတာပါ။ နောကျပါတဲ့ Miss ညီမ အယောကျ ၂၀ ကိုလညျး တောငျး ပနျပါတယျ။ သူတို့ရေးတာနညျး ပမေယျ့ ကိုယျဆဲတာမြားသှားတဲ့ အတှကျ တောငျးပနျပါတယျ။ ဆာရာ့ကို အကျစဈနဲ့ ပကျမယျ ပွောလိုကျတာလညျး သူငယျခငျြး အခငျြးခငျြးကို Live တငျပွီးပွောခဲ့ တဲ့အတှကျ ကိုယျ့အရှကျကွောငျ့ ပွောခဲ့မိတာပါ။ ဆာရာပရိသတျ တှကေိုလညျး တောငျးပနျပါ တယျ’’ဟု Live တှငျ ခွူးသကျလှငျက ပွောကွားခဲ့သညျ။
ဖုနျးကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ ယငျးစီစီတီဗီဗီဒီယိုဖိုငျသညျ ဇှနျ လ ၆ ရကျက ထှကျပျေါခဲ့ပွီးနောကျ လူမှုကှနျရကျတှငျ ဝဖေနျမှုမြား မွငျ့တကျခဲ့သညျ။ ယငျးဗီဒီယိုဖိုငျ ထှကျပျေါပွီးနောကျ ဝနျမခံဘဲ ငွငျးဆနျခဲ့သညျ့ ခွူးသကျလှငျ သညျ ဇှနျလ ၆ ရကျ ညနကေ လှငျ့ခဲ့သညျ့ Live တှငျ မှတျခကျြ ပွုရေးသားသညျ့ အကောငျ့ပိုငျရှငျမြားကို ဆဲဆိုခဲ့သေးသညျ။ အ ထကျပါကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ အ ခိုးခံရသညျ့ Miss Sarah Fish က ခှငျ့လှတျကွောငျးနှငျ့ ခွူးသကျ လှငျ၏ အနုပညာလှုပျရှားမှုမြား ကို ဆကျလကျအားပေးရနျ ၎င်းငျး၏ ဖစျေ့ဘှတျချအကောငျ့သဈမှ Live လှငျ့ပွီး တောငျးပနျပွောကွားခဲ့ သညျ။‘‘အားလုံးနားလညျပေးကွ ပါ။ အခုခွူးသကျလှငျကိုယျတိုငျ လညျး ဆာရာ့ကို ဝနျခံတောငျးပနျ ပွီးပါပွီ။ သူ့ဘကျကနောငျတရလို့ ဝနျခံသညျဖွဈစေ၊ အဖွဈသဘော အရ ဝနျခံသညျဖွဈစေ ဆာရာ ခှငျ့လှတျပါတယျ။ ဆာသူ့နာမညျ ကို ဖကျြတာမဟုတျဘူးနျော။ ဆာ အနုပညာလမျးကွောငျးထဲမှာ ခုမှ ဝငျခါစဖွဈတဲ့အတှကျ ဆာသာ အဲဒီအရာကို ခမြပွရငျ အကောငျး မမွငျပေးကွတဲ့ သူတှမြေားလာ ပါလိမျ့မယျ။ ဆာဖုနျးပြောကျသှား ကတညျးက ဆာသူ့ကို ခြိနျးတယျ။ဆာရာအကောငျ့ကို ဝငျသုံးနတေဲ့ အတှကျ ညီမရေ မသုံးပါနဲ့။ ဖုနျး လိုခငျြရငျ ယူသှားပါလို့ ပွောပါ တယျ။ ဒါပမေဲ့ သူကအကောငျ့ကို ဆကျပွီးသုံးတဲ့အပွငျ ပါဆငျနယျ ကိစ်စတှကေိုပါ ထိပါတယျ။ ဆာ အနနေဲ့ ပွောပွလို့ရပမေယျ့ သူ့ထိ ခိုကျမှာစိုးလို့ မပွောတော့ပါဘူး။ သူ့ဘကျကနလေညျး ဆာတဈခု လောကျ တောငျးဆိုခငျြတယျ။ အခုသူကလညျး ဆကျလကျပွီး သူ့လမျးကွောငျးနဲ့ သူသှားရမှာဖွဈ တဲ့အတှကျ သူပုံတငျသမြှ သူ့ရဲ့ လုပျငနျးမှနျသမြှကို ဆကျလကျပွီးအကောငျးဘကျမွငျပေးကွပါလို့၊ ဖုနျးသူခိုးဆိုတဲ့ နာမညျကိုလညျး မပွောမိအောငျ ထိနျးပေးကွပါလို့ သူ့အစား ဆာတောငျးပနျလိုပါ တယျ’’ဟု ဆိုသညျ။
၆ ရကျ နံနကျက တငျခဲ့သောခွူးသကျလှငျ၏ ဖုနျးမခိုးကွောငျး ငွငျးဆနျသညျ့ ဗီဒီယိုဖိုငျကို ကွညျ့ ရှုသူ လေးသိနျးကြျောရှိပွီး Live လုပျသူ ၁,၀၀၀ ကြျော၊မှတျခကျြပွုရေးသားသူ ၆၀၀ ကြျောနှငျ့ ပွနျ လညျဝမြှေသူ ၄၀၀ ကြျောခဲ့သညျ။